निधारमा यस्तो रेखा भएका मानिस ३५ वर्षपछि मात्र सफल ! - Naya Pusta
निधारमा यस्तो रेखा भएका मानिस ३५ वर्षपछि मात्र सफल !
Naya Pusta २०७४ श्रावण २ गते प्रकाशित
एजेन्सी : सामुद्रिक शास्त्रहरूका अनुसार हातमा मात्र नभई निधारमा पनि रेखाहरू हुन्छन् । निधारमा सातवटा रेखा हुने उल्लेख पाइन्छ तर सबै निधारमा यी सातै रेखा स्पष्ट रूपमा देखिँदैनन् । यी सात रेखाको सात ग्रहसँग सम्बन्ध छ । निधारमा कुन रेखा कहाँ हुन्छ र त्यसको के फल हुन्छ, हामी तपाईंलाई बताउँछौं ।
शनि रेखा निधारको सबभन्दा माथिल्लो भागमा हुन्छ । यो धेरै लामो हुँदैन र निधारको बीच भागमा देखिन्छ । कसैको निधार अग्लो र विकसित छ भने शनि रेखा स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो व्यक्ति गम्भीर, रहस्यमयी तथा अहंकारी हुन्छ । यस्तो व्यक्तिका बारेमा केही थाहा पाउनै गाह्रो हुन्छ । रहस्य विद्याका जानकार ज्योतिषी र तान्त्रिक यो वर्गमा पर्छन् । यिनीहरूले जीवनमा ३५ वर्षपछि मात्र सफलता हात पार्छन् ।
निधारमा माथिबाट दोस्रो रेखा गुरुरेखा हो । शनि रेखाभन्दा अलिक ठूलो हुन्छ यो । लामो र स्पष्ट रेखा कसैको निधा।मा देखियो भने उक्त व्यक्ति महत्त्वाकांक्षी र आत्मविश्वासी हुन्छ । यस्तो मानिस पढाइमा तेज हुन्छ । शिक्षको बलले नै यस्तो व्यक्तिले सफलता प्राप्त गर्छ । राजनीतिमा पनि यस्तो व्यक्ति सफल हुन्छ ।
यो गुरु रेखाभन्दा मुनि निधारको मध्यभागमा हुन्छ । सपाट वा उन्नत निधारमा मंगल रेखा छ अनि कनपटीमाथि अलिकति उठेको छ भने व्यक्ति पराक्रमी, आत्मविश्वासी र तीव्र बुद्धिमान् हुन्छ । यस्तो व्यक्ति सेना, प्रहरी वा कुनै प्रशासनिक पदमा रही जीवन बिताउँछ ।
अरू रेखाभन्दा लामो यो रेखा निधारको ठीक बीच भागमा हुन्छ । यो अटुट र स्पष्ट अनि लामो छ भने व्यक्तिको स्मरण शक्ति बलियो छ भनी बुझ्नुपर्छ । यस्तो व्यक्तिले कुनै पनि काम इमान्दारीपूर्वक गरेर सिध्याउँछ । यस्तो व्यक्तिको रुचि कलात्मक कार्यमा हुन्छ । मेहनतको बलमा यस्तो व्यक्तिले व्यवसायमा सफलता हासिल गर्छ ।
यो बुध रेखाभन्दा ठीक तल हुन्छ । सानो आकारको यो रेखा उन्नत निधारमा स्पष्ट रूपमा देखियो भने उक्त व्यक्ति प्राकृतिक सौन्दर्य प्रेमी हुन्छ । आकर्षक व्यक्तित्व भएको यस्तो मानिसलाई भौतिक सुखसुविधामा रुचि हुन्छ । सफा र ब्रान्डेड लुगा लगाउन मन पर्छ यस्तो मानिसलाई । संगीत, कला र सिनेमामा यस्ता व्यक्तिले सफलता हासिल गर्छन् ।
दाहिने आँखामाथि एक सानो रेखाका रूपमा सूर्य रेखा विद्यमान रहन्छ । यो रेखा स्पष्ट र पातलो छ भने व्यक्तिले आफ्नो कर्मका कारण मानसम्मान र प्रसिद्धि प्राप्त गर्छ । अनुशासनप्रिय, बुद्धिमान्, गणित जान्ने, शासनसत्ता सम्हाल्ने अनि राम्रो नेता यस्तो व्यक्तिको विशेषता हो । आफ्नो सिद्धान्तमा सम्झौता नगर्ने यस्तो व्यक्तिको जीवन सूर्यजस्तो चम्किलो हुन्छ ।
चन्द्र रेखा देब्रे आँखाको आँखीभौंमा एक सानो रेखाको रूपमा विद्यमान रहन्छ । यो सफा र स्पष्ट देखियो भने व्यक्ति कल्पनामा रमाउने र भावनामा बगेर कसैलाई हदभन्दा बढी मद्दत गर्ने खालको हुन्छ । यस्तो व्यक्ति कलाप्रेमी पनि हुन्छ र यसको स्मरणशक्ति पनि प्रबल हुन्छ । चित्रकला, संगीत, लेखन र सम्पादनमा यस्तो व्यक्तिले नाम कमाउँछ । असफलतामा एकदमै छिटो तनाव लिने पनि गर्छ यस्तो व्यक्तिले । तनावबाट बच्न ध्यान गर्नुपर्छ ।
बोलिभियाः भ्यागुतोका लागि जोडी खोजिँदै
तपाईको धन धेरै खर्च हुन्छ ? शास्त्र भन्छ, यस्तो हुनसक्छ कारण
बिपी राजमार्गमा टिप्पर आतंक, मन्त्रीकै गाडीलाई ठक्कर
एमाले-माओवादी एकता अलपत्र : ओलीको ध्यान राजपा र फोरमतिर
काँग्रेस संसदीय दलको सचेतकमा पुष्षा भुसाल
एकाधिकारको व्यापार गरिरहेका यातायात समितिको नवीकरण नहुने
जन्ती हिंडेको गाडी दुर्घटनामा : २१ को मृत्यु, १२ घाइते
अभिभावक बने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड
मासिक एक सय रुपैयाँमा अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा
प्रथम ग्रामीण आइडल प्रतियोगिता २०७४ सम्पन्न ।